DAAWO SAWIRADA: Baaritaan ku socda falkii Dilkii Ciise Jiijiile iyo Saraakiil Cadaan ah oo ka qeyb qaadanaya | Wakaaladda Wararka Hiilnews
DAAWO SAWIRADA: Baaritaan ku socda falkii Dilkii Ciise Jiijiile iyo Saraakiil Cadaan ah oo ka qeyb qaadanaya
Baladweyne(HNN) Guddi loo xil saaray baaritaanka dilkii dhawaan Afaafka hore ee tiyaatarka Qaranka ee magaalada Muqdisho loogu geestay Taliye kuxigeenkii hore Ciidanka Nabad sugida gobolka Banaadir Ciise Xasan Caraale (Jiijile) iyo ciidamo la socday.
Baaritaanka kiiskan waxaa Hogaaminaya taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Generaal C/Xakiin Saacid, waxaana halka uu dilku ka dhacay tagay ciidamo si gaar ah u tababaran oo katirsan booliiska Soomaaliya kuwaa oo baaraya qaabka uu dilku u dhacay.
Waxaa sidoo kale baaritaanka kiiskan gacan ka geesanaya saraakiil Cadaan oo taageeraya ciidanka boliiska ee baaritaanka sameenaya, waxaana la filayaa in dhawaan natiijo laga soo saaro kiiska baaritaanka dilka loo geestay Ciise Jiijiile.
Ciidanka Booliska ee sida gaarka ah loogu tababaray Baariska danbiyada iyo Isku dhaca ka dhasha dhimashada iyo dhaawaca ee loo yaqaano Joint Investigation Team (JIT) ayaa la arkayay iyaga oo ku siugan goobtii dilku ka dhacay , kadibna calaamadeeyay goobihii rasaasta ay ku dhacday iyo maydadka askartii NISA ka tirsanaa halkii ay yaaleen.
Baaritaankan oo ah mid qote dheer ayaa looga gon leeyahay in lagu ogaado sida uu u dhacay dilka sargaalkan katirsanaa Ciidanka Nabad sugida iyo waliba cidii masuulka ka aheed, waxaana la filayaa in dhawaan lasoo gabo gabeeyo baaritaankan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in baaritaan dhab ah lagu sameenayo kiiska dilkii ka dhacay agagaraka Madaxtooyada, waxa uuna sheegay in cadaalada la horgeyn doono tilaabo adagna laga qaadi doono dadkii lagu helo in ay ka dambeeyeen dilkaasi.
Waxaa hada xabsiga ku jira qaar badan oo kamid ah ciidankii ku sugnaa Koontaroolka Tiyaatarka kuwaa oo ka dambeeyay dilka sargaalka Nabad sugida iyo ciidankii la socday, waxaana la filayaa in askartaasi baaritaanka kadib la horgeeyo Maxkamada ciidamada qalabka sida.